Burco iyo Maqaamyada Mirqaanka (Marfashyada). 1-Qasab-ku-Mirqaan: markii aan idhi waayo waxa lay sheegay inay tahay meel yar, oo kulul oo adeegeedu liito,Sidaa darteed Waa Qasab ku mirqaan, Adoo kubaysan oo miyarna ka tagay waalina aan gaadhin ayaad fiidka meelaha Miliqsan sidii Qolyihii Vimpires ee dhiiga ku noola. 2- Iskuus-ama-Isbuur: Waxay iigu sharaxeen meel ka […]
Jacaylka iyo Siyaasadu Waa magacyada ugu caansan dunidan aan joogno tan iyo inta la xasuusto, Sababtu wax kale maaha waxay labaduba ku foolan yihiin Arimaha Bini-aadamka, Sidaad ogtahayna Aadamuhu waa waxa ugu Mudan noloshan Aduunyo, Anigu maan odhan Sidan ee Uumihii Kownka iska lahaa ayaa inoogu mana sheegtay Kitaabkiisa dahiran dhexdiisa, Waa Runtay oo Jacaylku […]
Ururka Xuquuqul insaanka ee Qadar ayaa xukumada Sacuudi Carabiya ku eedeeyay inay siyaasadeynayso arimaha xajka.Qadar waxay Sacuudiga ku eedeysay in muwaadiniinta Qadar ee sanadkan Xajka gudanaysa lagu wargeliya in Dooxa oo kaliya kasoo dhoofi karaan Sacuudigana ee kasoo geli karaan laba magaalo oo kaliya(Jiddah iyo Maddina). Qadar waxay dacwada Sacuudiga ka dhan ah ugudbisay Qaramada […]
Quraanshada, waxay ka mid tahay xasharaadka yaryar oo caalamka idil laga heli karo. Marka ay ku qaniinto quraanshada haka xanaaqin, hana u qaadan inay waxyeelo kuu geysatay, hana ku fekerin inaad disco. Waayo qaniinyadeedi waxay kuu leedahay faa’iido, waana inaad ugu mahadnaqdaa, faa’idada laga helo qaniinyada quraanshada waxay jirka gelisaa firfircooni waxayna kordhisaa xinjiraha dhiiga, […]
Caasigii La Cadaabay = W/Q: Mufakkir Maxamed Cabdirisaaq Saciid – Samiik
Mahad guud keed waxa ay u sugnaatay Eebbe weyne; Eebbahaa oo aan dhalin la na dhalin, xaq ahaanna ay tahay in la caabudo oo loo keliyeelo cibaaddada. Isaga, ayaa ah, abuuraha dhammaan abuurraleyda, sida: aadmiga, cirarka, dhulalka, qorraxda, xiddigaha, dayaxa, buuraha, xayawaanaadka IWM. Ilaaha weyn, waa mid ka hufan idayl xume nooc wal ba; kana […]
Sawiro: Yaabka Yaabkiisa: Arin Lala Yaabay Oo Lagu Arkay Cirifka Ugu Danbeya Aduunka
Baarayaal heer caalami ah ayaa doonaya in ay ogaadaan sababta ka dambaysa god weyn oo lagu arkay cirifka Waqooyi ee caalamka ee gobolka Siberia dalka Ruushka. Godkan oo uu arkay duuliye dayuurad helikobtar ah oo dul maraysay ayaa sawir laga soo qaaday waxaa lagu qiyaasay in uu ballaciisu gaaraya boqol mitir iyadoo aan la ogeyn […]
YAABKA YAABKIISA:Geed Dadka Cuna Oo Bulshada Deegaanka Uu Ka Baxaa Aaminsan Yihiin In Uu Yahay Cadhadii Awoowyadood
Koox Khubaro ah oo u dhalatay dalka Ingiriiska ayaa 30 Sano ka hor u safray Jasiirad ku taalla badwaynta Hindiya oo ay ka samaynayeen cilmibaadhis, waxa aanay sheegeen in ay Jasiiradaas ku soo arkeen Geed la sheegay in uu cuno dadka iyo xayawaanka, taas oo si ay u xaqiijiyaan ay muddo u kuurgaleen. Waxaana u […]
Sheekh Nuur Baaruud oo kamid ah Culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo Xalay ka qayb Galay Barnaamijka Taageerada Ciidanka Qalabka Sida ayaa sheegay inaan Soomaaliya Diyaar u ahayn Mar danbe in Dib loogu Celiyo Mooshin iyo Muran Siyaasadeed. HALKAN KA DAAWO VIDEO “Diyaar uma Nihin Mooshin Danbe, Mooshinku markuu Maslaxad Soomaaliyeed waanu soo […]
– Caafimaadka dumarka iyo ragga ayaa siyaabo kala duwan wuxuu ugu xiran yahay hab dhaqanka nolaleed ee labadaasi jinsi, waxaana jira waxyaabo badan oo qayb ka qaata caafimaad xumada hadii aan loo helin xal lagaga waantoobo hab dhaqanka iyo dabeecada qofnimo. Daraasad cusub oo ay soo saareen kooxo quburo dhanka caafimaadka ah ayay ku cadeeyeen ku […]
Imaaraadka Carabta oo ka mid ah wadamada Khaliijka ee xiriirka u jaray Qatar ayaa ku hanjabay inay cunaqabateyn dheeraad ah ku soo rogayaan Qatar. Safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Ruushka Omar Saif Ghobash ayaa sheegay in suura gal tahay in Qatar ay wajahaan cunaqabateyn dheeri ah. Dalalka Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Baxreyn iyo Masar ayaa horay […]